i-India inwebe ukuba ngaphezulu kwama-Proteas Women
u-Radha Yadav uhole okunye ukushwiba okunamandla kwi-India njengoba bengaphambili ngo-3-0 kwi-T20 International Series bedlala nama-Proteas Women ngokudlala kahle e-Lalabhai Contractor Stadium e-Surat ngoLwesine.
i-left-arm spinner ikhiphe izinti ezintathu ngama-runs awu-23 kuma-overs amane njengoba iqembu lasekhaya linqobe ngezinti ezinhlanu kusele amabhola awu-17 emuva komdlalo ofakiwe njengoba imidlalo embili kwimidlalo emithathu kwi-series iqedwe imvula.
Izivakashi zihlulekile ukuqhubeka emuva kokuqala kahle futhi bagcine ku-98 kuphume izinti eziyisishagalombili njengoba beshayiswe kuqala.
Baqale kahle ngokufika ku-57 kuphume ababili nge-over yesi-12 ngenxa ka-Laura Wolvaardt (17) no-Lizelle Lee (16).
Kodwa, njengakumdlalo odlule, izinto zibhedile emuva kwalokho njengoba umdlali omncane u-Yadav ekhiphe abashaya phakathi nendawo ngendlela akhipha ngayo.
u-Deepti Sharma naye udlale indima ngokukhipha ababili ngama-runs awu-19, kwathi u-Harmanpreet Kaur uthole inti eyodwa ngama-runs awu-13 – ama-South Africans ebeka umphumela ka-99 kuphela.
i-Player of the Match u-Kaur ushaye u-34 off 32 balls njengoba i-India ifike kuphumela kuma-overs awu-17.1.
Oshwiba ngokushesha u-Shabnim Ismail ushwibe kahle wakhipha izinti ezimbili ngama-runs awu-19.
Umdlalo wokugcina njengoba sekuphenduke i-series yemidlalo eyisithupha uzodlalwa enkundleni efanayo ngoLwesihlanu. Umdlalo uzovezwa ku-SuperSport ngo-15:30 (SAST).
Ama-Proteas Esifazane anethuba lokubuyela kwimidlalo Ama-Proteas aphumule futhi alungele uvivinyo Ukuhlasela kwa-Lee kuhlela umdlalo ozocacisa nge-series u-Luus no-Moreeng bakhaliswa ukungazinzi behlulwa kwi-T20I yesithathu U-50 ka-Kapp no-Lee kulinganisa i-T20 series All-round Nida Dar puts Pakistan 1-0 in T20 series Ama-Proteas esifazane azimisele ngokuthuthuka kuyela kumdlalo wokuqala we-T20 series enemidlalo emihlanu u-Moreeng usekela ukuqina komqondo kwi-South Africa kanye nekhono lokubuya kahle kuyela kwi-WODI yesibili u-Kapp uyakujabulela ukufika ukuqopha umlando kumsebenzi wakhe i-South Africa ihlelele i-ODI series yabesifazane Abancane babheke ukuthatha amathuba kuhambo lama-Proteas esifazane